Isivivinyo samandla wokuqina wokugcina - iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Isivivinyo sokuqina samandla wokugcina okunye okubizwa ngokuthi yi-maximal mechanical tensile test esetshenziswa ukukala amandla okuvimba imithwalo yemikhiqizo eminingi.
Lokhu ukuhlolwa kokusebenza lapho amandla okudonsa esetshenziswa entweni evela ezinhlangothini zombili kuze kube yilapho isampula lishintsha ukwakheka noma ukuphuka kwalo. Isivivinyo esivamile nesibalulekile esihlinzeka ngemininingwane ehlukahlukene mayelana nezinto ezihlolisiswayo, kufaka phakathi ubude, iphuzu lokunikezela, amandla okuqina, namandla amakhulu walokho okubhaliwe.
-Pole ulayini ukumiswa izibopho
Ukubanjwa komuntu owenziwe kabusha
Ubunzima -ADSS imikhawulo efile
-FTTH iconsi izibopho
Ukuhlolwa kokukhuthazelela imishini yokuhlola ukungezwani kokuhluleka ngaphansi kwengcindezi yemishini neyokushisa enengcindezi ye-oscillation inamanani ahlukile ngokuya ngamazinga EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 yezinsiza zokusabalalisa ugesi, kanye ne-IEC 61284 yezingaphezulu ze-fiber optic ikhebula, nezinsiza.
Sisebenzisa ukuhlolwa okujwayelekile kwamazinga emikhiqizweni emisha ngaphambi kokuqalisa, nokwenziwa nsuku zonke, ukuze siqiniseke ukuthi ikhasimende lethu lingathola imikhiqizo ehlangabezana nezidingo zekhwalithi.